'Oge a ga-arụ ọrụ | Martech Zone
'Oge ahụ Arụ Ọrụ
Wednesday, November 23, 2011 Na Mọnde, Nọmba 22, 2011 Douglas Karr
Anyị biputere nso nso a kpaliri omume kacha mma maka oge ezumike ahụ, infographic na ndụmọdụ sitere na Delivra, an email ahịa ụlọ ọrụ. Xobni, a nnọọ jụụ igbe arụpụtaghị ngwá ọrụ, weputara nke a ihe omuma infographic na ole n'ime anyị ga-arụ ọrụ na ọbụna ịlele email site na ezumike.
Otu onye 79% nke ndị okenye na-arụ ọrụ na United States na-ekwu ha nweta email ọrụ na ememe ezumike dika Ekele, Hanukkah, Christmas, wdg; na 68% na email kwetara ịlele ya. Site na Ọmụmụ
N'ụzọ dị mwute, 41% nke ndị kwetara ịlele email n'ihi na ha kwenyere na ịme nke a ga-eme ka ọrụ ọrụ belata ozugbo ha si na "ezumike" lọta. Hmmm… Echere m na nke ahụ bụ mgbede Sọnde ọ bụla m.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ka a nụ gị, ikekwe ozi ịntanetị na-apụ apụ n'oge ezumike ga-abụ ohere ka mma imeghe! Kpachara anya, ọ bụ ezie na… 37% nke ndị e nyochara kwetara na ha nwere mmetụta iwe, nwee nkụda mmụọ ma ọ bụ iwe mgbe ị natara ozi-e metụtara ọrụ na ezumike. Amaara m nke a - ezitela m otu! 🙂
Tags: channukahKrismasogwe akaezumikeinfographicinye ekele
Adobe Proto: Aka Prototyping na Mbadamba ụrọ gị
Etu anyị si erule nlele ọnwa 100,000